Subbly: Mandrosoa ny serivisinao boaty famandrihana amin'ity sehatra ecommerce ity | Martech Zone
Fahatezerana lehibe hitantsika amin'ny ecommerce dia boaty famandrihana fanomezana. Ny boaty mpanjifa dia tolotra mahaliana… manomboka amin'ny kitapo fisakafoanana, vokatra fanabeazana ho an'ny ankizy, hatramin'ny fitsaboana alika… mpanjifa am-polony tapitrisa no misoratra anarana amin'ny boaty famandrihana. Ny fanamorana, ny maha-izy azy, ny zava-baovao, ny tsy ampoizina, ny exclusivité ary ny vidiny dia toetra mampiavaka ny varotra boaty famandrihana rehetra. Ho an'ny orinasa ecommerce mamorona, ny boaty famandrihana dia mety ahazoam-bola satria manova ny mpividy indray mandeha ho mpanjifa miverimberina ianao.
Ny tsenan'ny eCommerce fisoratana anarana dia mitentina eo amin'ny $ 10 miliara (tsy manilika an'i Amazon Prime sy ny safidiny "misoratra anarana ary mitahiry").
Solika avy amin'i McKinsey
Ny ankamaroan'ny rindrambaiko famandrihana dia mandray ny famandrihana ho toy ny endri-javatra fotsiny amin'ny orinasanao: karazana manohana azy izy ireo, saingy matetika no tsy manam-pahaizana izy io ary tsy tafiditra mora foana amin'ny orinasanao na tranokala misy. Ary amin'ny tranga hafa dia tsy famandrihana-voalohany fotsiny izy ireo, fa alohan'ny tsena-voalohany na mpanorina tranokala aloha.
Betsaka ny pitsiny amin'ny fahaizan'ny e-varotra boaty famandrihana. Ny tolotra lehibe dia mampiditra ny fitantanana kaonty, ny safidin'ny olona manokana, ny fangatahana fanemorana, ny fanoloana, ny mandeha ho azy ary ny - mazava ho azy - ny fanodinana fandoavam-bola. Ny ankamaroan'ny sehatra e-varotra malaza dia tsy mampiditra ireo fahaiza-manao ireo amin'ny sehatra misy azy… mitaky fampidirana antoko fahatelo na fivoarana manokana mba hampandeha tsara azy rehetra.
Subbly: Sehatra fisoratana anarana boaty ecommerce
Manampy orinasa iray aho dieny izao mba hamantatra ny safidiny rehetra hanala ny serivisin'izy ireo amin'ny tany ary ho hita Subbly. Subbly dia manolotra ireto boaty fisoratana anarana manaraka ireto ho fototry ny sehatra misy azy ireo:
Ny fandoavam-bola famandrihana - Raiso ny fandoavam-bola avy amin'ny mpanjifanao miverimberina hatrany fa tsy mila manao na inona na inona tanana. Vantany vao misoratra anarana ny mpanjifanao dia hikarakara ny ambiny i Subbly hahafahanao miala sasatra am-pitokisana fa ny vola miditra miverimberina dia ho avy amin'ny herinandro, volana, na taona ho avy.
Tapaho ny daty ary apetraho ny daty fanavaozana - Volavola amin'ny andro mitovy isam-bolana ny mpanjifanao rehetra, mametraha andro tapaka ho an'ny andro fandefasana, ary safidio ny andro andefasana ny fandefasan'ny mpanjifanao. Ny faktiora sy ny fandefasana entana mifanentana amin'ny ilain'ny orinasanao.
"Build-a-box" sy ireo filàna fanoratana sarotra hafa - Te avelanao ny mpanjifanao hanamboatra ny famandrihany amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny safidy, na ny fisafidianana ireo vokatra ao anatin'ny fandefasan'izy ireo? Aza mitady lavitra intsony, Subbly dia manana mpamorona fanadihadiana manokana hamelana ny famandrihana azo ekena ho an'ny mpanjifanao ary hahafahanao manolotra traikefa manokana.
Kitapo fanoratana sy fandefasana azo ekena - Isam-bolana, isan-kerinandro, isan-taona, isan-telovolana ary mihoatra! Atambaro ny tsingerin'ny fandefasana sy ny faktiora mba hifanaraka amin'ny filanao fandefasana faktiora sy fandefasana entana. Azonao atao ihany koa ny mamela ny mpanjifanao hisafidy izay tiany mandritra ny fizahana.
Tsy nahomby ny fanarenana vola - Mahasosotra ny fandoavana karatra tsy mahomby! Ny churn tsy an-tsitrapo dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fitaovana fanarenana fandoavam-bola tsy voavidim-bola
Fotoam-pitsapana - Avelao ny mpanjifanao hanandrana boaty famandrihana santionany amin'ny vola kely kokoa ary asaivo manavao izy ireo amin'ny tsingerina fohy kokoa noho ny mahazatra amin'ny vidin'ny fisoratana anarana mahazatra.
Fotoana fanoloran-tena - Aringano miaraka amin'ny fe-potoana fanoloran-tena. Manolora fisoratana anarana 12 volana karama isam-bolana ary manoloa fihenam-bidy hamporisihana ny mpanjifa hanao.
Subbly dia afaka mifangaro amin'ny fivarotana efa misy ao amin'ny Wix, Shopify, Squarespace, WooCommerce, Weebly, na ampidirina ao amin'ny tranonkalanao ankehitriny.
Subbly dia sehatra e-commerce voalohany amin'ny famandrihana. Miaraka amin'ny mpanamboatra tranokala, ny alàlan'ny fizahana, ny fampidirana entana sy ny logistics, ny fitaovana marketing sy ny fitomboana, ny fitantanana ny mpanjifa (CRM), sy ny fiasa hafa… sehatra mahafinaritra izy io izay manohy manatsara ny tolotra omeny.
Andramo Subbly maimaim-poana
Fampahalalana: mampiasa rohy mpiara-miasa aho Subbly mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: CRMsehatra ecommerceshopifysquarespaceambanyboaty famandrihanasehatra boaty famandrihanafanompoanaweeblyWixwoocommerce
Composable: Manome amin'ny fampanantenanao manokana